Farmaajo oo darajooyinkii ka xayuubiyey Taliye ku xigeenkii hore ee NISA
MUQDISHO - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdulahi Farmaajo ayaa warsaxafadeed uu soo saarey ku sheegey in darajooyinkii ciidanka uu ka dhigey Taliye ku xigeenkii hay'ada Nabad sugida Sareeyo Guuto Cabdall Cabdalla Maxamad kadib markii dhowaan laga qaadey xilkii uu yahay.
Taliye ku xigeenka oo xilka ka qaadistiistiisu timid mudda gaaban ka hor inta aan loo magacaabin darajada agaasime ku xigeenka hay'adaan Fahad Yaasiin ayaa xafiiskiisa oo ku yaal gudaha xarunta NISA koox aan la aqoon jabsatey isagoo arinkaas wareysi ka siiyey Idaacada VOA qaybteeda Af-Soomaaliga. Halkaan ka dhageyso.
Wareysigaan kadib xiligaas oo Madaxweyne Farmaajo ka maqnaa ayaa qoraal kasoo baxay hay'adda ayaa Taliyaha waxaa laga ruqseeyey gabi ahaan hay'adda isagoo dhinaca kale laga qaadey waardiyahiisa gaarka. Lama oga sababta Madaxweyne Farmaajo Warsaxafadeed gaar ah ugu soo saarey darajo ka dhigida taliyahaan.
Hoos ka akhri warsaxafadeedka Madaxtooyada dowlada Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhigay dhammaan darajooyinkii ciidan, kana ruqseeyay hay'adda nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Sarreeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed keddib soojeedin ka timid Agaasimaha Guud ee Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Farmaajo oo darjada ciidan ka dhigay Cabdalla, kana saarey NISA
Soomaliya 09.09.2018. 10:40
Fahad Yaasiin, oo xiriir dhaw la leh Sirdoonka Qadar ayaa loo gacan-geliyay NISA, isagoo...
NISA oo Khabiir Qaraxyada u qaabilsanaa Al-Shabaab Muqdisho ku qabtey
Soomaliya 28.09.2018. 16:42
Fahad Yaasiin oo dalka Kenya lugaha u galiyey khilaafka khaliijka [Sabab]
Caalamka 10.09.2018. 01:41